Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Nitombo ny fahaveloman'ny homamiadan'ny havokavoka
Tatitra vaovao: Nitombo ny fahaveloman'ny homamiadan'ny havokavoka, saingy mijanona ho ambany kokoa ho an'ny olona miloko.
ny vaovao Tatitra momba ny "State of Lung Cancer". dia manambara fa ny tahan'ny homamiadan'ny havokavoka mandritra ny dimy taona dia nitombo 14.5% teo amin'ny firenena ka hatramin'ny 23.7% nefa mbola ambany kokoa eo amin'ireo vondrom-piarahamonina misy loko. Ny American Lung Association 4th Ny tatitra isan-taona, navoaka androany, dia manasongadina ny fiovaovan'ny isan'ny homamiadan'ny havokavoka araka ny fanjakana ary mandinika ireo tondro fototra manerana an'i Etazonia ao anatin'izany: tranga vaovao, fahavelomana, aretina aloha, fitsaboana fandidiana, tsy fahampian'ny fitsaboana ary ny tahan'ny fitiliana.
Araka ny tatitra, ankoatra ny taham-pahavelomana ambany kokoa, ny olona miloko voan'ny kanseran'ny havokavoka dia miatrika vokatra ratsy kokoa raha oharina amin'ny fotsy hoditra, anisan'izany ny tsy dia voan'ny aretina aloha loatra, tsy dia mahazo fitsaboana amin'ny fandidiana ary tsy mahazo fitsaboana. Ity no taona faharoa nanadihadian'ny tatitra "Fanjakan'ny Kanseran'ny havokavoka" ny vesatry ny homamiadan'ny havokavoka eo amin'ireo vondrona vitsy an'isa ara-poko sy ara-poko eo amin'ny sehatra nasionaly sy fanjakana.
“Ny tatitra dia manasongadina vaovao manan-danja - betsaka kokoa ny olona velona amin'ny homamiadan'ny havokavoka; na izany aza, manasongadina ihany koa ny zava-misy fa, indrisy, ny tsy fitoviana ara-pahasalamana dia mitohy ho an'ny vondrom-piarahamonina misy loko. Raha ny marina, raha nitombo ho 23.7% ny tahan'ny homamiadan'ny havokavoka nasionaly, dia 20% ihany izany ho an'ny vondrom-piarahamonina misy loko ary 18% ho an'ny Amerikana mainty hoditra. Mendrika ny hanana fiainana feno sy salama ny tsirairay, noho izany dia tsy maintsy atao bebe kokoa ny fiatrehana ireo tsy fitoviana ara-pahasalamana ireo, ”hoy i Harold Wimmer, Filoha Nasionaly sy Tale Jeneralin'ny Fikambanana Lung.
Manakaiky ny olona 236,000 any Etazonia no ho voan'ny homamiadan'ny havokavoka amin'ity taona ity. Ny tatitra 2021 "Fanjakan'ny Kanseran'ny havokavoka" dia nahita ireto fironana nasionaly manaraka ireto amin'ny taham-pahavelomana, ny fitiliana mialoha ary ny fitsaboana ny aretina:
Taham-pahavelomana: Ny kanseran'ny havokavoka dia iray amin'ireo taham-pahavelomana ambany indrindra mandritra ny dimy taona satria matetika ny aretina dia hita any amin'ny dingana manaraka, rehefa tsy dia azo sitranina izany. Ny salan'isa nasionalin'ny olona velona dimy taona taorian'ny fitiliana ny homamiadan'ny havokavoka dia 23.7%. Ny taham-pahavelomana no tsara indrindra tany Connecticut tamin'ny 28.8%, raha toa kosa i Alabama no laharana ratsy indrindra tamin'ny 18.4%.
Diagnose aloha: Ao amin'ny firenena, 24% amin'ny tranga ihany no voan'ny aretina amin'ny dingana voalohany rehefa avo kokoa ny taham-pahavelomana dimy taona (60%). Indrisy anefa, ny 46% amin'ny tranga dia tsy tratra raha tsy amin'ny dingana farany raha 6% ihany ny taham-pahavelomana. Ny tahan'ny fitiliana voalohany dia tsara indrindra tany Massachusetts (30%), ary ratsy indrindra tany Hawaii (19%).
Fandinihana ny homamiadan'ny havokavoka: Ny fitiliana ny homamiadan'ny havokavoka miaraka amin'ny scan CT ambany fatra isan-taona ho an'ireo atahorana dia mety hampihena hatramin'ny 20% ny tahan'ny fahafatesan'ny homamiadan'ny havokavoka. Eo amin'ny firenena, 5.7% amin'ireo atahorana ho voan'ny aretina ihany no voasivana. Massachusetts dia manana ny tahan'ny screening ambony indrindra amin'ny 17.8%, raha i California sy Wyoming kosa no ambany indrindra amin'ny 1.0%.
Fandidiana ho dingana voalohany amin'ny fitsaboana: Ny homamiadan'ny havokavoka matetika dia azo tsaboina amin'ny fandidiana raha vao fantatra fa tsy miparitaka. Raha ny firenena dia 20.7%-n’ny tranga ihany no nodidiana.
Tsy fahampian'ny fitsaboana: Betsaka ny antony tsy ahafahan'ny marary mahazo fitsaboana aorian'ny fitiliana. Ny sasany amin'ireo antony ireo dia mety tsy azo ihodivirana, saingy tsy tokony hisy olona tsy voatsabo noho ny tsy fahampian'ny mpanome na ny fahalalan'ny marary, ny fanilikilihana mifandray amin'ny homamiadan'ny havokavoka, ny fahafatesan'ny olona aorian'ny fitiliana, na ny vidin'ny fitsaboana. Amin'ny firenena, 21.1% amin'ny tranga tsy mahazo fitsaboana.
Fandrakofana Medicaid: Ny fandaharan'asan'ny fanjakana Medicaid amin'ny saram-panompoana dia iray amin'ireo mpandoa ara-pahasalamana tokana tsy voatery handrakotra ny fitiliana ny homamiadan'ny havokavoka ho an'ny mponina atahorana. Ny Fikambanan'ny Lung dia nandinika ny politikan'ny fandrakofana ny homamiadan'ny havokavoka ao amin'ny fandaharan'asan'ny Medicaid momba ny saram-panompoana an'ny fanjakana mba hanombanana ny sata ankehitriny momba ny fandrakofana ny homamiadan'ny havokavoka ho an'ny mponina Medicaid ary nahita fa ny fandaharan'asan'ny Medicaid 40 amin'ny saram-panompoana dia mandrakotra ny fitiliana homamiadan'ny havokavoka, fandaharana fito no tsy manome fandrakofana, ary fanjakana telo no tsy nanana vaovao momba ny politikan'ny fandrakofana azy.
Na dia mampiseho asa manan-danja tokony hatao aza ny valin'ny tatitra momba ny "State of Lung Cancer", dia misy ny fanantenana. Tamin'ny volana martsa 2021, ny United States Preventive Services Task Force dia nanitatra ny tolo-kevitry ny fitiliana mba hampidirana sokajin-taona lehibe kokoa sy mpifoka sigara ankehitriny na taloha. Izany dia nampitombo be ny isan'ny vehivavy sy ny Amerikana mainty hoditra izay mendrika ny fitiliana ny homamiadan'ny havokavoka.
Ny Fikambanan'ny Havokavoka dia mamporisika ny rehetra handray anjara amin'ny ezaka hamaranana ny homamiadan'ny havokavoka. Mankanesa ao amin'ny Lung.org/solc raha te hianatra bebe kokoa momba ny homamiadan'ny havokavoka ao amin'ny fanjakana misy anao ary sonia ny fanangonan-tsonianay mba hampitomboana ny famatsiam-bola ho an'ny Foibe Fanaraha-maso sy Fisorohana ny Aretina mba hiarovana ny fahasalaman'ny firenentsika amin'ny aretina, anisan'izany ny homamiadan'ny havokavoka.
Ho an'ireo mpifoka sigara amin'izao fotoana izao sy taloha dia misy loharano mamonjy aina. Fantaro raha azo atao ny manao fitiliana homamiadan'ny havokavoka ao SavedByTheScan.org, ary miresaha amin'ny dokoteranao momba ny fanaovana fitiliana.